မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ်သားအစိုးရကို ဖယ်ရှားပြီး အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ စစ်တပ်အပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ဖို့ ကြေညာလိုက်တာကြောင့် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အကဲခတ်တွေ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေ နောက်ထပ် တိုးလာနိုင်တဲ့အပေါ် အမြင်တွေကိုတော့ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မမေခက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူတွေကို ပစ်မှတ်ထား အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ဖို့ သမ္မတက အတည်ပြုလက်ခံလိုက်တဲ့အကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုး ဘိုင်ဒင် (Joe Biden) ကိုယ်တိုင် ကြေညာလိုက်တာကြောင့် သက်ရောက်မှုတွေ သိသိသာသာ တွေ့ရတော့မယ်လို့ အကဲခတ်တွေ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၈၈ မျိုးဆက်က ဦးဂျင်မီ ကတော့ အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ ကြေညာချက်ဟာ အာဏာသိမ်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီ အသိုင်းအဝန်းက လက်မခံဘူးဆိုတာကို ပြသရာရောက်တဲ့ ပြောဆိုချက်ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အမေရိကန်အနေနဲ့ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်တွဲလုပ်လာတာ တော်တော်လေးကိုကြာပြီ။ ဒီမိုကရေစီကို နှောင့်နှေးအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတာက မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် တော်တော်လေးခရီးရောက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကချက်ချင် တုံပြန်တာက ဒီအာဏာသိမ်းလုပ်ရက်ကိုအမေရိကန်က လက်မခံဘူး ကမ္ဘာကြီးကလက်မခံဘူး။ ဒါရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ချက်။. နောက် သူတို့targetက စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ထိပ်ပိုင်းတွေကိုထိခိုက်ဖို့ အရေးယူဖို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ အနည်းနဲ့အများအထိ နာတာဘဲ
"အမေရိကန်က ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်မယ့် စာရင်းကို ဒီတပတ်ထဲ ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်သလို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရပိုင် ဒေါ်လာသန်း ၁ ထောင်ကို အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ မတရားရယူမှာကို တားဆီးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သမ္မတ ဘိုင်ဒင်က ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒဏ်ခတ်မယ့် အစီအစဉ်မှာတော့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေကို ထိန်းချုပ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်"။
စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမင်းခင် ကတော့ ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဒဏ်ခတ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုတွေဟာ ပြင်းထန်နိုင်တယ်လို့လည်း သုံးသပ်ပါတယ်။
"ဒဏ်ခတ်မှုတွေက အခုကြားရသလောက်ဆိုရင် ဟိုတုန်းကလုပ်နိုင်တဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ပြန်လုပ်လာနိုင်တဲ့အလား လာရှိတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး တိုးလုပ်မယ်ဆိုလဲ တိုးလုပ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဒေါ်လာစီးဆင်းတာကော အဲ ဒါတွေထိရိုက်ခတ်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ လက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဘဲ အားကိုးနေရတဲ့ မြန်မာပြည်စီးပွားရေး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ အဲဒါတွေကို အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အဆင့်ထိဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အလားအလာ ကတော့တော်တော်ပြင်းထန်မယ်ယူဆပါတယ်။ နောက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးက ယုံကြည်မှုပေါ့နော် ဒီနိုင်ငံဒီလိုဖြစ်တယ်ဆို တဲ့ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုရင်းနှီးမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာပေါ့။ ခုလက်ရှိမှာလည်း ပြည်တွင်းမှာ တော်တော်စပြီးထိနေပြီလေ။ ဆိုတော့ ဒီပေါ်နောက်ထပ်တခါထပ်ဆောင်းရင် တော်တော်ကို အန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်လာမယ် ပြောလို့ရတယ်"
အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အကျိုးအမြတ်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်သွားမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ တိုက်ရိုက်အကျိုးရှိမယ့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တခြားကဏ္ဍတွေကိုတော့ ဆက်လက် ကူညီမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမင်းခင်ကတော့ အရင်နဲ့မတူတဲ့ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ တွေ့မြင်ရမယ့် အလားအလာရှိတယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
" အရင်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မတူတာတွေလာနေပြီပေါ့လေ။ ရှေ့လည်းလာဦးမယ်သိပ်ကြာတဲ့ အချိန်မဟုတ်ချိန်မှာတော့ဒါသိလာလိမ့်မယ်။ သိလာရင်တော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းနိုင်ငံရေးမှာ အများကြီးသိလာလိမ့် မယ်။ လက်ရှိအာဏာသိမ်း အုပ်စုအပေါ်မှာတော့ အများကြီး ထိခိုက်လာဖို့ရှိတယ်"
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲ တာဝန်ရှိတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အဆက်အဆံ ဖြတ်တောက်တာတွေ၊ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ဖို့ သတိပေးတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ရှိနေတာပါ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်းက -
နိုင်ငံရေးအရ ပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ ပျက်ကွက်မယ်ဆိုရင် ဒဏ်ခတ်မှုတွေက တဆင့်ချင်းမြင့်တက်လာ နိုင်မယ်။ အဲလိုမြင့်တက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲအကျိုးဆက်က ကျနော်တို့နိုင်ငံကျနော်တို့ပြည်သူလူထုအပေူါ်မှာ အတိုင်း အတာတခုထိ သက်ရောက်လာနိုင်တာကို သုံးသပ်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ဆက်စပ်စဉ်းစားတာမှာ နိုင်ငံရေး အရ အဖြေရှာဖို့ ပိုဦးစားပေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်"
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းက ဖိအားတွေ တိုးလာနေရာမှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် တရပ်ကို တခဲနက်ချမှတ်ထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးအစည်းအဝေးတရပ်ကို မနက်ဖြန် သောကြာနေ့မှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ် ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အရပျသားအစိုးရကို ဖယျရှားပွီး အာဏာသိမျးလိုကျတဲ့ စဈတပျအပျေါ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုက အရေးယူ ဒဏျခတျဖို့ ကွညောလိုကျတာကွောငျ့ ကွီးမားတဲ့ သကျရောကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျတယျလို့ တကျကွှလှုပျရှားသူတှနေဲ့ အကဲခတျတှေ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။ စဈအာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ နိုငျငံတကာ ဖိအားတှေ နောကျထပျ တိုးလာနိုငျတဲ့အပျေါ အမွငျတှကေိုတော့ ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ မမခေက စုစညျးတငျပွထားပါတယျ။
ဒီမိုကရစေီနညျးကြ ရှေးခယျြတငျမွှောကျထားတဲ့ အစိုးရခေါငျးဆောငျတှကေို ဖမျးဆီးပွီး စဈတပျက အာဏာသိမျးလိုကျတဲ့ လုပျရပျမှာ တာဝနျရှိသူတှေ၊ ဆကျနှယျပတျသကျသူတှကေို ပဈမှတျထား အရေးယူ ဒဏျခတျဖို့ သမ်မတက အတညျပွုလကျခံလိုကျတဲ့အကွောငျး အမရေိကနျသမ်မတ ဂြိုး ဘိုငျဒငျ (Joe Biden) ကိုယျတိုငျ ကွညောလိုကျတာကွောငျ့ သကျရောကျမှုတှေ သိသိသာသာ တှရေ့တော့မယျလို့ အကဲခတျတှေ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့က ဆန်ဒပွပှဲတှမှော ပါဝငျလှုပျရှားနတေဲ့ နိုငျငံရေးတကျကွှလှုပျရှားသူ ၈၈ မြိုးဆကျက ဦးဂငျြမီ ကတော့ အမရေိကနျသမ်မတရဲ့ ကွညောခကျြဟာ အာဏာသိမျးတဲ့ လုပျရပျကို ကမ်ဘာ့ဒီမိုကရစေီ အသိုငျးအဝနျးက လကျမခံဘူးဆိုတာကို ပွသရာရောကျတဲ့ ပွောဆိုခကျြဖွဈတယျလို့ မွငျပါတယျ။
( အမရေိကနျအနနေဲ့ မွနျမာဒီမိုကရစေီရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး လကျတှဲလုပျလာတာ တျောတျောလေးကိုကွာပွီ။ ဒီမိုကရစေီကို နှောငျ့နှေးအောငျလုပျတဲ့သူတှကေို ပွဈဒဏျခတျတယျဆိုတာက မွနျမာဒီမိုကရစေီရေးလှုပျရှားမှုအတှကျ တျောတျောလေးခရီးရောကျပါတယျ။ အမရေိကနျကခကျြခငျြ တုံပွနျတာက ဒီအာဏာသိမျးလုပျရကျကိုအမရေိကနျက လကျမခံဘူး ကမ်ဘာကွီးကလကျမခံဘူး။ ဒါရှကျဖို့ကောငျးတယျဆိုတဲ့ မှတျခကျြဖွဈသှားပွီ။ ဒါစိတျပိုငျးဆိုငျရာမှတျခကျြ။. နောကျ သူတို့targetက စဈအစိုးရခေါငျးဆောငျ ထိပျပိုငျးတှကေိုထိခိုကျဖို့ အရေးယူဖို့လုပျမယျဆိုတော့ အနညျးနဲ့အမြားအထိ နာတာဘဲ)
"အမရေိကနျက ပဈမှတျထား ဒဏျခတျမယျ့ စာရငျးကို ဒီတပတျထဲ ထုတျပွနျမှာဖွဈသလို အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုမှာ ရှိနတေဲ့ မွနျမာအစိုးရပိုငျ ဒျေါလာသနျး ၁ ထောငျကို အာဏာသိမျးစဈခေါငျးဆောငျတှေ မတရားရယူမှာကို တားဆီးသှားမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး သမ်မတ ဘိုငျဒငျက ပွောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒဏျခတျမယျ့ အစီအစဉျမှာတော့ ပို့ကုနျလုပျငနျးတှကေို ထိနျးခြုပျသှားမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ"။
စီးပှားရေးပညာရှငျ ဦးမငျးခငျ ကတော့ ကမ်ဘာမှာ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး အငျအားကွီးနိုငျငံဖွဈတဲ့ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုက ဒဏျခတျမှုတှကွေောငျ့ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ရိုကျခတျမှုတှဟော ပွငျးထနျနိုငျတယျလို့လညျး သုံးသပျပါတယျ။
"ဒဏျခတျမှုတှကေ အခုကွားရသလောကျဆိုရငျ ဟိုတုနျးကလုပျနိုငျတဲ့ ဒဏျခတျမှုတှကေို ပွနျလုပျလာနိုငျတဲ့အလား လာရှိတယျ။ ဒီထကျပိုပွီး တိုးလုပျမယျဆိုလဲ တိုးလုပျနိုငျတယျလို့ယူဆရတယျ။ နိုငျငံတကာ ဒျေါလာစီးဆငျးတာကော အဲ ဒါတှထေိရိုကျခတျလာလိမျ့မယျထငျတယျ။ လကျရှိအမရေိကနျဒျေါလာကိုဘဲ အားကိုးနရေတဲ့ မွနျမာပွညျစီးပှားရေး နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှဟော အဲဒါတှကေို အကွီးအကယျြ ခွိမျးခွောကျတဲ့ အဆငျ့ထိဖွဈလာနိုငျတယျ။ အလားအလာ ကတော့တျောတျောပွငျးထနျမယျယူဆပါတယျ။ နောကျပွီးအရေးကွီးဆုံးက ယုံကွညျမှုပေါ့နျော ဒီနိုငျငံဒီလိုဖွဈတယျဆို တဲ့ရှလြေှ့ောကျဘယျလိုရငျးနှီးမလဲဆိုတဲ့ ပွဿနာပေါ့။ ခုလကျရှိမှာလညျး ပွညျတှငျးမှာ တျောတျောစပွီးထိနပွေီလေ။ ဆိုတော့ ဒီပျေါနောကျထပျတခါထပျဆောငျးရငျ တျောတျောကို အန်တရာယျမြားတဲ့ အခွအေနေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖွဈလာမယျ ပွောလို့ရတယျ"
အမရေိကနျသမ်မတရဲ့ ကွညောခကျြမှာတော့ အာဏာသိမျး စဈခေါငျးဆောငျတှေ အကြိုးအမွတျရမယျ့ ကိစ်စတှကေို တားဆီးပိတျပငျသှားမှာ ဖွဈပမေဲ့ မွနျမာပွညျသူတှေ တိုကျရိုကျအကြိုးရှိမယျ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုတှေ၊ အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ တခွားကဏ်ဍတှကေိုတော့ ဆကျလကျ ကူညီမှာဖွဈကွောငျးလညျး ပွောဆိုထားပါတယျ။
စီးပှားရေးပညာရှငျ ဦးမငျးခငျကတော့ အရငျနဲ့မတူတဲ့ အရေးယူဒဏျခတျမှုတှေ တှမွေ့ငျရမယျ့ အလားအလာရှိတယျလို့ သုံးသပျပါတယျ။
" အရငျအတှအေ့ကွုံတှနေဲ့မတူတာတှလောနပွေီပေါ့လေ။ ရှလေ့ညျးလာဦးမယျသိပျကွာတဲ့ အခြိနျမဟုတျခြိနျမှာတော့ဒါသိလာလိမျ့မယျ။ သိလာရငျတော့လကျရှိအာဏာသိမျးနိုငျငံရေးမှာ အမြားကွီးသိလာလိမျ့ မယျ။ လကျရှိအာဏာသိမျး အုပျစုအပျေါမှာတော့ အမြားကွီး ထိခိုကျလာဖို့ရှိတယျ"
စဈတပျက အာဏာသိမျးခဲ့ပွီးနောကျမှာပဲ တာဝနျရှိတဲ့ မွနျမာစဈတပျနဲ့ အဆကျအဆံ ဖွတျတောကျတာတှေ၊ အရေးယူ ဒဏျခတျဖို့ သတိပေးတာတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ဥရောပသမဂ်ဂ (EU) ကလညျး မွနျမာနိုငျငံအပျေါ အရေးယူဒဏျခတျမှုတှကေို ပွနျလညျသုံးသပျဖို့ ရှိနတောပါ။
မွနျမာ့နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ ဒေါကျတာ ရနျမြိုးသိမျးက -
နိုငျငံရေးအရ ပွဿနာတှကေို နိုငျငံရေးနညျးအရ ပကျြကှကျမယျဆိုရငျ ဒဏျခတျမှုတှကေ တဆငျ့ခငျြးမွငျ့တကျလာ နိုငျမယျ။ အဲလိုမွငျ့တကျလာနိုငျမယျဆိုရငျ အဲအကြိုးဆကျက ကနြျောတို့နိုငျငံကနြျောတို့ပွညျသူလူထုအပျေူါမှာ အတိုငျး အတာတခုထိ သကျရောကျလာနိုငျတာကို သုံးသပျစဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။ ဒါတှနေဲ့ ဆကျစပျစဉျးစားတာမှာ နိုငျငံရေး အရ အဖွရှောဖို့ ပိုဦးစားပေးသငျ့တယျ ထငျပါတယျ"
စဈတပျက အာဏာသိမျးတဲ့ လုပျရပျအပျေါ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝနျးက ဖိအားတှေ တိုးလာနရောမှာ ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေး ကောငျစီကလညျး မွနျမာနိုငျငံက အခွအေနတှေအေပျေါ စိုးရိမျကွောငျးနဲ့ ဖမျးဆီးထားသူတှကေို ပွနျလှတျပေးဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြ တရပျကို တခဲနကျခမြှတျထားပါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေး ကောငျစီမှာလညျး မွနျမာနိုငျငံက နိုငျငံရေးအကပျြအတညျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အထူးအစညျးအဝေးတရပျကို မနကျဖွနျ သောကွာနမှေ့ာ ကငျြးပဖို့ စီစဉျထားပါတယျ ။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ကိုဗစ်တားဆီးရေး အခက်ကြုံရဖွယ်ရှိ